दोश्रो फिल्मबाट आशावादी सुपुष्पाFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
दोश्रो फिल्मबाट आशावादी सुपुष्पा
फिल्मी फण्डा । पहिलो फिल्म फ्लप, कलाकार फ्लप । तर, गतिलो ब्यानरका फिल्म भयो भने कलाकारहरुको पनि सम्भावना हुन्छ । जस्तो कि, उपासना सिंह ठकुरी । उनको पहिलो फिल्म ‘क्याप्टेन’ व्यवासायिक रुपमा सफल हुन सकेन । भुवन केसी, अनमोल केसी जोडिएका कारण यो फिल्मको असफलताले उनलाई असर गरेन । ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ मा काम पाइन् । त्यस्तै ‘रणवीर’बाट डेब्यू गरेकी सुपुष्पा भट्ट थोरै भाग्यमानी ठहरिएकी छिन् । फिल्म ‘छ माया छपक्कै’मा काम गर्ने अवसर पाइन् । फिल्ममा उनको पुग नपुग पाँच सिन रहेको चर्चा छ ।
उनले पहिलो फिल्म रिलिजलगत्तै पनि अनमोलसँग स्प्राइटको विज्ञापन खेल्ने मौका पाएकी थिइन् । सानै भूमिका भए पनि उनी अहिले दीपकराज गिरीको अपोजिटमा देखिदै छिन् । सुपुष्पा यो फिल्म सँग जोडिन पाउँदा उत्साहित देखिएकी छिन् । उनले फिल्मको छायांकनको क्रममा रमाएका तस्वीर र भिडियो सामाजिक संजालमा शेयर गरिरहेकी छिन् । उनको यो दोश्रो फिल्म हो । करियरको दोश्रो फिल्मबाट अहिले नै आशावादी हुनु पर्ने चाहिँ खासमा हतार भयो की, सुपुष्पा ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बर्षालाई श्रीमानको साथ, निर्देशक भन्छन् ‘तिमी जस्ती छौ त्यस्तै भैराख’
फिल्मी फण्डा । फिल्म जात्रै जात्रा शोका लागि हाल अस्ट्रेलियामा रहेकि नायिका बर्षा राउतको पहिरनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा मजाक भइरहेको छ । विशेष शोमा उनले लगाएको पहिरनको अहिले ट्रोल नै बनेका छन् । बर्षाको पहिरनलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला पति संजोग कोइराला भने बचाउमा आएका छन् । उनले फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै कठिन समयमा पनि माया गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
संजोगले ‘म तिमीलाई जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि आनन्दित तुल्याउनेछु र एकसाथ हाम्रो समय अगाडि बढाउनेछु ।’ संजोगले लेखेका छन् –‘तिमी सधै सही कुरा भन्न र गर्न सक्दिनौ, यो ठिक छ । तिमी यहाँ पूर्ण हुनका लागि होइन, वास्तविक हुनका लागि छौ ।’ उनी थप लेख्छन् – ‘म तिमीलाई प्रोत्साहन गर्छु, सम्मान गर्छु । म तिमीलाई साथ दिन्छु र तिम्रो लडाइमा छेउमै उभिनेछु । म संघर्ष र कठिन समयमा पनि तिमीलाई माया गर्नेछु ।’
त्यस्तै जात्रै जात्राका निर्देशक प्रदीप भट्टराईले पनि बर्षालाई माया गर्नेको कुरा सुन रिस गर्नेलाइ वास्ता नगर भन्ने आशयको स्टाटस लेखेका छन् । भट्टराई लेख्छन् ‘एउटा कुरामा ढुक्क हुनुस बर्षा राउतलाइ चर्चामा आउन लुगाको साहारा लिनुपर्दैन उन्को आफ्नो अभिनय नै उन्को लागि पर्याप्त छ । उनी कलाकार हुन्, परि आए जस्तो पनि जस्तो पहिरन लाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
बर्षा तिमीसग दुइटा चलचित्रमा काम गरियो तिमी मेरो मनपर्ने कलाकार हौ तिमीसग काम गर्न सधै पाइराखियोस ..तिमी जस्ती छौ त्यस्तै भैराख माया गर्नेको कुरा सुन रिस गर्नेलाइ बाल ।’ वास्तवमा सधै सोझि र सरल रुपमा देखिएकी बर्षालाई केही हदसम्म खुलेकी देख्दा दर्शक तथा मिडियाले गसिपको शिकार बनाएका थिए । बर्षा भन्दा बढि खुल्ने नेपाली नायिकाहरु धेरै छन् । यतिखेर बर्षासँग यो सन्दर्भ जोडिनु एउटा घटना हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : मोफ​स​ल​मा प​नि ब​क्स​ अफिस​, लाल​ब​न्दिको वीणा ह​ल​बाट​ शुरु
फिल्मी फण्डा । उप​त्यकामा ब​क्स​ अफिस​ प्र​णाली शुरु भ​एको एक ब​र्ष​ भ​एको छ​ । य​ही बिच​मा च​ल​चित्र​ बिकास​ बोर्ड​ले काठ​माडौं उप​त्य​का बाहिर​​प​नि ब​क्स​ अफिस​ प्र​णाली शुचारु ग​रेको छ​ । आगामी साउन​स​म्म​ देशैभ​र​ ब​क्स​ अफिस​ शुचारु ग​र्ने नीति अनुसार​ स​र्लाही जिल्लाको लाल​ब​न्दिमा र​हेको वीणा च​ल​चित्र​ म​न्दिर​बाट​ ब​क्स​ अफिस​को औप​चारिक उद्घाट​न​ ग​​रेको हो ।
नेपाल​ स​र​कार​का प्र​ब​क्ता स​मेत​ र​हेका सुच​ना त​था संचार​ प्र​विधी म​न्त्री मान​नीय​ गोकुल​ प्र​साद​ बाँस्कोटाले अन​लाईन​ टिकेटिङ्ग​ प्रिन्ट​ ग​र्दै मोफ​स​ल​मा​ ब​क्स​ अफिस​को औप​चारिक उद्घाट​न​ ग​रेका हुन । लाल​ब​न्दिको वीणा ह​ल​सँगै स​र्लाही, म​होत्त​री, प​र्सा स​हित​ प्र​देश​ २ का १० व​टा ह​ल​ह​रुमा ब​क्स​ अफिस​ सुचारु ग​रेको छ​ । ब​क्स​ अफिस​ शुचारुसँगै ब​क्स​ अफिस​को स​बै रिपोर्ट​ अन​टाईम​ पाउन​ स​किने भ​एको छ​ । यो क्र​म​लाई ७ व​टै प्र​देश​मा साउन​ १ स​म्म​ शुचारु ग​रिस​क्ने कार्य​क्र​म​का स​भाप​ति त​था च​ल​चित्र​ बिकास​ बोर्ड​का अध्य​क्ष​ केश​ब​ भ​ट्ट​राईले ब​ताएका छ​न् ।
कार्य​क्र​ममा प्र​देश​ नं २ का प्र​देश​ स​भा स​द​स्य​ मान​नीय​ बेचु लुङ्गेली, च​ल​चित्र​ बिकास​ बोर्ड​का स​द​स्य​ त​था ब​क्स​ अफिस​ प्र​णालीका संयोज​का न​रेन्द्र​ म​ह​र्ज​न​, निर्माता संघ​का अध्य​क्ष​ आकाश​ अधिकारी, प्राबिधिक संघ​का अध्य​क्ष​ पुष्कर​ लामा, जिल्ला प्र​मुख​ अधिकारी द्रोण​ पोख​रेल​, जिल्ला स​म​न्व​य​ स​मितीका अध्य​क्ष​, लाल​ब​न्दि न​ग​र​पालिकाका मेय​र​ मान​ ब​हादुर​ ख​ड्का, उधोग बाणिज्य​ संघ​ स​र्लाहीका अध्य​क्ष​ कल्याण​ जोशी, जिल्ला प्र​हरी स​र्लाहीका प्र​मुख​, च​ल​चित्र​ बिकास​ बोर्ड​का स​द​स्य​ स​चिब​ म​हेन्द्र​ साखी, नेकपा स​र्लाहीकी संयोज​क रेव​ती प​न्त, ब​क्स​ अफिस​ प्र​णालीका प्राबिधिक प्र​तिनिधी नितेश​ गोर्खाली​ ल​गाय​त​को उप​स्थिती र​हेको थियो ।
ब​क्स​ अफिस​ प्र​णाली शुरु ग​रेको काठ​माडौंका ह​ल​ह​रुलाई प​नि साउन​ १ ग​ते भित्र​ अन​टाईमा डाटा प​ठाउन​ बोर्ड​का अध्य​क्ष​ केश​ब​ भ​ट्ट​राईले आग्र​ह​ ग​रेका छ​न् । संचार​म​न्त्री बाँस्कोटाले काठ​माडौंमै अत्याधुनिक ईन्डोर​ फिल्म​ शुटिङ्ग​ स्टुडियो निर्माण​मा बोर्ड​ लाग्न​ प​नि अनुरोध​ ग​रेका छ​न । मोफ​स​ल​मा ब​क्स​ अफिस​ सुचारु ग​रेको वीणा ह​ल​का संचाल​क प​व​न​ गुप्ता हुन् भ​ने अध्य​क्ष​ न​रेन्द्र​ म​ह​र्ज​न​ हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : नेपाल सरकारको बजेटमा फिल्म पनि
फिल्मी फण्डा । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६\_७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि फिल्म क्षेत्रले पनि प्रथमिकता पाएको छ । फिल्म क्षेत्रको लागि भनेर अघि सारेको चलचित्र नीति तथा कार्यक्रम लक्षित गरि ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको क्रममा साहित्यकार, कलाकार र संगीतकारको वृत्ति विकासका लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने र त्यसका लागि आवशयक बजेट वितरण गर्ने बताईएको छ ।
यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट नेपाली श्रमजीवी फिल्मकर्मीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले फिल्मकर्मीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् । फिल्मकर्मीहरुको हकहित तथा सुरक्षाको व्यवस्था गर्दै उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै ‘छायांकनका लागि नेपाल’ अभियानको सुरुवात समेत गर्ने बताइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न स्टुडियो निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसको लागि स्थानको तय भने भइसकेको छैन । बक्स अफिसबारे बजेट भाषणमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : फिल्म क्षेत्रको लागि आशावादी बन्न सक्ने बजेट
फिल्मी फण्डा । सामान्यतया बजेटलाई आय र व्ययको विवरण भनिएतापनी बजेट गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिहरुको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरुको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिहरुको प्रक्षेपित अनुमानको दस्तावेज हो । बजेट आवधिक योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने माध्यम पनि हो ।
नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६\_७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् । ०८ सालमा ५ करोड २५ लाखको बजेट ०७६\_७७ मा आइपुग्दा १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोडको आकारमा आइपुगेको छ ।
बजेटको आकार बढ्दै जाँदा फिल्म क्षेत्रले भने बजेटमा प्राथमिकता पाउन सकेको थिएन । तर, आर्थिक बर्ष २०७५\_७६ को बजेटले फिल्म क्षेत्रलाई केही राहत दिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५\_७६ को बजेट सार्वजानिक गर्दा अर्थमन्त्री डा. यवराज खतिवडाले हरेक क्षेत्रमा संभावित योजनाहरु निर्माण हुनेछ र ती योजनाहरुलाई आवश्यक बजेट प्रदान गरिने बताईएको थियो ।
‘सरकारी, निजी र विदेशी साझेदारीमा फिल्म नगरी निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने सरकारको योजना छ । फिल्म व्यवसायमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, फिल्म विकास शुल्क लगायतका राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न इलेक्ट्रोनिक टिकेटिङ सहित फिल्म वितरण र प्रदर्शन गर्न बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिनेछ । सन्देशमूलक फिल्मलाई प्रदर्शनीमा लाग्ने करमा सहुलियत दिइनेछ ।’
०७५\_७६ को बजेटमा परेका बक्स अफिस ०७६\_७७ को बजेटमा परेन । बक्स अफिस उपत्यकामा लागि सकेको छ । तर, देखिने र महशुस हुने गरि नलागेको फिल्मकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । बक्स अफिस छिट्टै नै मोफसलमा पनि लागु हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल वास्कोटाले सार्वजानिक रुपमा भन्दै आइरहेका छन् । फिल्म क्षेत्रको लागि भनेर अघि सारेको फिल्म नीति तथा कार्यक्रम लक्षित गरि ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपि फिल्म नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको छ ।
शिल्यान्यास समेत भइसकेको दोलखाको डाङडुङे डाँडामा बन्न लागेको अन्तराष्ट्रियस्तरको फिल्म सिटीको चर्चा २०६८ साल देखि भएको हो । तर, सानो रकमको बजेट छुट्याइदा उक्त योजना अलपत्र जस्तै बनेको थियो । उक्त योजनालाई प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने संभावना बलियो छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘छायांकनका लागि नेपाल’ नामक कार्यक्रमको शुरुवात गर्ने जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले वर्ष २०७६\_७७ को बजेट विनियोजनका क्रममा आगामी वर्षलाई ‘छायांकनका लागि नेपाल’ का रुपमा शुरुवात गर्ने बताए । नेपालमा हलिउड र बलिउडका फिल्महरु शुटिङ नभएका होइनन् । बजेटमा नै नेपाललाई शुटिङस्थलको रुपमा विकास गरिने योजना ल्याउँदा फिल्मकर्मीहरु उत्साहित छन् । तर, कार्यान्वयनको अभावमा सुन्दर योजनाहरु खेर गइरहेको अवस्थामा ‘छायांकनका लागि नेपाल’ योजना पनि अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने आशंका फिल्मकर्मीमा रहेका छन् । यदि यो योजना सफल भए नेपाल ‘शुटिङ हब’ को रुपमा विकार हुनेछ ।
बजेटमा काठमाडौं उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न स्टुडियो निर्माण प्रारम्भ गरिने जनाइएको छ । जसको लागि आवश्यक बजेट सरकारले प्रबन्ध गर्नेछ । सरकारले श्रमजिवी फिल्मकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने पनि जनाएको छ । यो योजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा फिल्मकर्मीहरुलाई राहत पुग्नेछ ।
फिल्म क्षेत्रले उद्योगको रुप नलिएसम्म यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको वृत्ति विकास र यस क्षेत्रको उन्नती हुन नसक्ने मत लामो समयदेखि फिल्मकर्मीहरुले राख्दै आएका छन् । सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई हलुका रुपमा लिएर गम्भिर रुपमा नलिने हो भने फिल्म क्षेत्रले अपेक्षित फड्को मार्न सक्दैन । आशा गरौँ फिल्म क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने बजेट अगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तर रहने छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : नयाँलाई अफरै अफर
फिल्मी फण्डा । केही दिन अघि फिल्म प्रेमगीत ३ को लागि गीत पात्रको नायिका छनोटको लागि अवेदन दिएकामध्ये शीर्ष २५ छनोट गरिएको छ । एक जनाको लागि २७ सय १४ जनाको आवेदन परेको प्रमेगति ३ युनिटले दावी पनि गर्यो । यसले ग्ल्यामर क्षेत्रमा धेरैको आकर्षण रहेको देखाउँछ ।
उता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘एमाले’का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय दुर्घटनामा आधारित फिल्म ‘दासढुंगा’को दोस्रो भाग निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । घोषणा गरेको फिल्म युनिट नयाँ कलाकारको खोजीमा रहेको छ ।
स्वर्गीय नेता भण्डारीको पुण्य तिथिको अवसर पार्दै विभिन्न भूमिकाको लागि कलाकारको खोजि भइरहेको एक विज्ञप्ती मार्फत निर्माण टिमले जानकारी गराएको हो । फिल्मको सहायक निर्देशक, कला निर्देशक, सिजिआई निर्देशक, साउण्ड डिजाइनर तथा अन्य प्राविधिक, बाल कलाकार, थिएटर व्यागराउण्ड कलाकारको लागी अडिसन आव्हान गरिएको छ ।
फिल्म क्षेत्रमा नयाँ कलाकार र प्राविधिकको आगमन हुनु यस क्षेत्रको लागि फाइदाजनक कुरा हो । तर, नयाँ व्यत्तिहरुको प्रवेशको प्रतिक्षा गर्नु भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । गुणस्तरिय फिल्मको अभावमा नेपाली फिल्म ओरालो यात्रामा रहेको फिल्मकर्मीहरुको बुझाई रहेको छ ।
कलाकारको खोजी सदा चल्दै आईरहेको छ । फिल्म दासढुंगा को सिक्वेलको लागि प्राविधिकहरु पनि नयाँ खोजी गरेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । नयाँ खोज्ने क्रममा क्षमतावानलाई ल्याउन सके उपलब्धि हुन्छ । अन्यथा नयाँको नाममा विकृती मात्रै प्रवेश हुने डर पनि हुन्छ ।